I-11 + Yezikhulu Ezihamba Phambili Ku-Anime Odinga Ukwazi Ngazo - Okunye
I-11 + Ye-Prince Enhle Ku-Anime Odinga Ukwazi Ngayo
Kwenzekani uma kungekho okubukelayo okunikeza intshisekelo ku-anime? Kuthiwani ngokuzama ukubuka i-anime yasebukhosini?
Kukhona i-anime enhle ephathelene nobukhosi ongayibuka uma ngabe yilokho okufunayo.
Kukhona ngisho ne-anime yasebukhosini enendaba enhle, futhi hhayi wonke ama-anime asebukhosini anesiphetho esihle.
Nalu uchungechunge ongafuna ukulibuka olunenkosana yasebukhosini.
eyodwa. Hikaru Tsuki ( UNaruto the Movie: Wombuso Wenyanga YaseCrescent)
INkosana uHIkaru Tsuki ivela kwelinye lama-movie we-anime we-Naruto.
Lapho ehlangana noHikaru ekuqaleni kwe-movie, wayebonakala onakele futhi engenabo abangane. Kodwa-ke, lapho echitha isikhathi noNaruto nabangane bakhe, wanquma ukushintsha.
Wakwazi ukusindisa impilo kayise futhi ekugcineni wenza ubungani phakathi kukaNaruto nabanye. Lokhu empeleni kungenye yamabhayisikobho engiwathandayo eNaruto, iqala kancane bese kugcwala isenzo.
Kuyibhayisikobho emnandi yeNaruto okufanele uyibuke kodwa kufanele ubuke iNaruto kancane okungenani ukuze ukwazi ukuqonda ukuthi kwenzekani.
Futhi i-movie ayiyinde kakhulu ukuyibuka uma ufuna ukubuka okuthile okufushane.
Kuyafaneleka: Imicimbi engu-10 + KuNaruto Eyenze Uzumaki Umuntu Anguye Namuhla
ezimbili. Prince umoya wami ( I-Yu-gi-oh)
IPrince Atem ivela ku-anime weYugioh, futhi abalandeli abaningi bayayazi i-Atem kusuka ochungechungeni 'lwangempela'.
Awuyiboni iPrince Atem kuze kube yisizini edlule futhi kuphela ukubuya emuva okuvela ku-Atem kaFaro kubuyisa izinkumbulo zakhe.
IPrince Atem ingabangane abakhulu kuMana naseMahad, bobabili bangabenzi bemilingo kwathi kamuva ngokuzayo baba Intombazane Yomlingo Omnyama noMlingo Omnyama ngenkathi uPegasus, umdali weDuel Monsters enza lo mdlalo.
Ngesikhathi sokukhumbula inkumbulo yaseGibhithe kukaYu-gi-oh, ubona ngokusobala ukuthi kwakunjani ngePrince Atem ngaphambi kokuthi umoya wakhe uvalelwe entweni yeminyaka eyinkulungwane.
Kufanele uqonde lonke uchungechunge lwe-Yu-gi-oh yasekuqaleni ngaphambi kokubuka isizini edlule, ngicabanga ukuthi uzolahleka ngokwenzekayo.
Kunezinkathi eziphelele zonyaka ezinhlanu.
Okuhlobene: Zonke Izingcaphuno Ezinkulu Kunazo Zonke Ezake Zazwa Kusuka Kuchungechunge LweYugioh!
3. URyoma Echizen (iNkosana Yethenisi)
Kungakho isihloko, URyoma Echizen uyi-prodigy yenkanyezi ngaphakathi kwethenisi. Uqale ukudlala ithenisi esemncane, ngesikhathi engena eSeigaku, wonke umuntu wayazi ukuthi ungubani ngaphakathi kwezinkundla zethenisi.
URyoma uluhlobo lwasebukhosini ngamunye njengoba eyinkosana kwazise waziwa kakhulu emhlabeni wethenisi.
Uma uqala ukuhlangana noRyoma, uyinkukhu futhi ucabanga ukuthi angashaya noma ngubani emhlabeni we-tennis.
Kodwa-ke uyashintsha lapho amaqhinga akhe kuthenisi engasebenzi ngaso sonke isikhathi futhi nozakwabo bemsiza ngaphakathi kwe-anime.
I-anime iyi-anime enhle yezemidlalo uma uthanda umdlalo wethenisi. Noma ngubani ubengayibuka futhi iluchungechunge olude uma ungafuni ukubukela i-anime emfushane.
Okuhlobene: Iqoqo Lezicaphuni zePrince Tennis Ukukunikeza Ukuqhuma Kwesikhathi Esidlule
4. USchneizel waseBrithani (Code Geass)
USchneizel unobuhlakani futhi angayishaya iLeLouch ku-chess lapho besebancane. Unezindima eziningi ngaphakathi kochungechunge lweCode Geass, ngokwesibonelo: USuzaku weCounterattack.
ISchneizel yiyona eyinhloko ophikisana naye ngenkathi eseCode Geass unendima encane.
Kunezincwadi eziningi zeCode Geass uma uthanda ukufunda, kodwa kuneziqephu ezingaba ngu-25 zochungechunge bese kuba khona amafilimu futhi njengoba womabili anamahora amabili ubude.
ICode Geass akuyona i-anime endala, sekuphele iminyaka engaphezu kwengu-10 + selokhu i-anime yasakazwa kuthelevishini.
5. IPrince Soma (IBlack Butler)
Prince Soma uzama ukwenza uCiel amthande futhi abe abangani, nokho wajabula kakhulu lapho uCiel emtshela ukuthi ekugcineni bangabangani. Akafuni ukuba nesizungu futhi uncamela ukuba seduze nabanye.
IBlack Butler unamasizini amabili ne-OVA, abantu abaningi bacabanga ukuthi uBlack Butler kungenzeka ukuthi wayenguLuthando Lwabafana phambilini.
Kimi, uPrince Soma ekuqaleni wayebukeka enamakhekhe kepha ngicabanga ukuthi ubedinga nje ukuba nabantu.
IBlack Butler iseyi-anime yeminyaka engu-5 + kusukela ngosuku lokugcina lomoya futhi ngaleyo ndlela icishe ibe yintsha futhi yakamuva.
Okuhlobene: 15 Kwabalingiswa Bama-Anime BaseNdiya Abathandeka Kakhulu
6.I-Utena Tenjou (I-Revolutionary Girl Utena)
Utena Uyi-tomboy uqobo futhi waba yinkosana ngemuva kokuthi inkosana engaziwa imnikeze 'iRose Crest Ring.'
Uphumelela emqhudelwaneni we-dueling e-Ohtori Academy futhi ahlanganyele nentombazane egama lingu-Anthy. I-anime iyi- ingqikithi yobungqingili futhi ube nokubuyekezwa okuhle okuningi eminyakeni edlule.
I-anime endala futhi isitayela kungenzeka singathandeki kuwe uma usibuka.
Ngenye yama-anime asaziwa namanje.
7.INkosana Endymion (Sailor Moon)
INkosana Endymion yimpilo edlule kaMamoru Chiba futhi wayethandana noPrincess Serenity.
U-Endymion akakwazanga ukubulala uSailor Moon ngenxa yothando olwedlule ababelana ngalo bobabili ngenkathi i-Endymion ingaphansi kokulawulwa kwengqondo. Kodwa-ke, waphinde wabanjwa kamuva ku-anime futhi wabulawa nguBeryl futhi kwaba njalo uvukile futhi.
Indaba phakathi kukaSailor Moon no-Endymion izwakala imnandi futhi ibuhlungu.
Uma ufuna ukubuka i-anime yothando, USailor Moon ungomunye we-anime onezigcawu zothando ngaphandle kokuba nezinhlamvu zasebukhosini.
8.Zen Wistaria (Isithwathwa esimhlophe nezinwele ezibomvu)
INkosana Wistaria unabasizi ababili eceleni kwakhe futhi uyinkosana yesibili kuClarines Kingdom.
Unomfowabo osekhulile owaba yinkosi yeClarines Kingdom.
UZen unobungane futhi uyabakhathalela abanye abantu ngenkathi ebhekele isigodlo sakhe. Yena noShirayuki bathandana njengoba uShirayuki eba ngumuthi wamakhambi eClarines.
Okuhlobene: Izithandani Ezingabonakali Ngokusobala Zama-Anime Ezingcono Kakhulu
9.Shi Seiran (Indaba kaSayiunkoku iNkosana)
Shi Seiran waba yinkosana eyadingiswa futhi wazigunda ngisho nezinwele zakhe ezinde ezazisho ukuthi “uphawu lwezikhulu.”
Ngaphambi kokudingiswa, wayeyinkosana futhi eba umbusi. Unina wabulawa ngababulali ngakho-ke uShi Seiran wajoyina iqembu labaphangi.
Kukhona iziqephu ezingama-80 sezindaba zesaiunkoku prince kanye namanoveli ambalwa nevolumu manga.
imibukiso emihle kakhulu ye-anime tv sonke isikhathi
Uchungechunge lwe-anime alukho mdala kangako futhi lubukeka “lusha” uma ulibuka.
10. UKai von Glanzreich (The Royal Tutor)
UKai von Glanzreich unesidlaliso esithi 'INkosana Ekhazimulayo' ngoba wonke umuntu ucabanga ukuthi uyethusa kepha abazi ukuthi unenhliziyo enomusa.
UKai futhi uyinkosana yesibili kwezinkosana ezine, unomfundisi wangasese wasebukhosini omsizayo.
Ungadla ngokweqile ubuke umfundisi wasebukhosini ngasikhathi sinye ngoba ineziqephu eziyishumi nambili kuphela.
Kukhona nefilimu ye-anime esanda kuphuma ngonyaka odlule.
Okuhlobene: Kwezingcaphuno ze-Anime Ezinkulu Ezivela KuRoyal Tutor
11. INkosana uCharles (Cinderella Monogatari)
Prince charles unamakhono okubamba izinkemba futhi uyinkosana ye-Emerald Kingdom e-Emerald Castle.
UCinderella noPrince Charles babe abangane abakhulu bese uPrince Charles ethandana noCinderella.
I-anime: UCinderella Monogatari uchungechunge oludala lwe-anime kusuka kuma-90s futhi luchungechunge lwase-Italy-Japanese.
Kuyindaba enhle enendaba edabukisayo kodwa isiphetho esijabulisayo ekugcineni kochungechunge. Uma uthanda isitayela esidala sama-anime, uCinderella Monogatari ungomunye walolo chungechunge.
Ukuba yinkosana kusho ukuthi uzolandela emgqeni wokubusa umbuso, kodwa kwesinye isikhathi, kungahle kube nezenzakalo ezingezinhle ezingeke zikuvumele ukuthi kwenzeke.
Akuzona zonke izikhulu okufanele zibe nesiphetho esijabulisayo, futhi ngaleyo ndlela kukhona i-anime ethile njenge lokhu okukhombisa lokho.
Umlingisi webhonasi: Imifino - iNkosana yawo wonke amaSaiyans!
Yisiphi esinye isikhulu se-anime ongasicabangela?
Umthombo wesithombe ofakiwe: https://www.wallpapermaiden.com/
Abalingiswa abangama-20 + Abesilisa be-Anime abanezinwele ezinde Abafanelwe Isikweletu Esengeziwe!